संसद विघटनबारे कहिले आउला अदालतको आदेश? - Nepal Readers
संसद विघटनबारे कहिले आउला अदालतको आदेश?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आज ०७७ पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा लगेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । यो इजलासले पुस १० मा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग संसद् विघटनबारे जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार जवाफ पेस भइसकेको छ । बुधबारदेखि अब दुवै पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ ।
कहिले आउला आदेश?
संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गरेको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या ठूलो छ । सुरुमा निवेदकको तर्फबाट बहस हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारी वकिलको पालो आउँछ । यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री वा विपक्षीले राखेका निजी वकिलहरूले पनि यसमा बहस गर्नेछन् ।
सीमित दिनमा मात्र इजलास बस्ने र बहसमा धेरैलाई सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले आदेश आउन भने कम्तीमा १ महिना लाग्नसक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो भएमा माघको अन्तिम सातातिर मात्र यसबारे अदालतको आदेश आउन सक्छ ।गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । तर यो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १ दर्जन बढी रिट परेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणले सडकसमेत तातेको छ । विभिन्न दलले यसको विरोधमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।न्यायिक छिनोफानो हुन केही समय लाग्ने भएकाले देश अबको केही समय अन्योलमै गुज्रने देखिएको छ ।